By ဝေယံအောင် 24 February 2017
မြန်မာ့ဝေဟင်ထက်မှ အသံထက်မြန်သော ပျံသန်းမှုများ
စာရေးသူ – မြတ်ဟိန်း
စာအုပ်အမည် – မြန်မာ့ဝေဟင်ထက်မှ အသံထက်မြန်သော ပျံသန်းမှုများ
မြန်မာ့တပ်မတော်(လေ)ကို ၁၉၄၇ ခုနှစ်မှာ စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၅၄ ခုနှစ်မှာ ဗင်ပိုင်ယာ(Vampire) ဂျက်တိုက် လေ ယာဉ်၊ ၁၉၆၃-၁၉၆၇ ခုနှစ်တွေမှာ တီ-၃၃ ဂျက်တိုက်လေယာဉ်တွေနဲ့ လေကြောင်းအင်အားကို ဖြည့်တင်းခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းကာလတွေမှာတော့ အသစ်မဝယ်နိုင်တဲ့အပြင် ရှိပြီးသား လေယာဉ်တွေအတွက် အပိုပစ္စည်းတွေဝယ်ဖို့တောင် ခက်ခဲလာခဲ့ပါတယ်။ တပ်မတော်အစိုးရဟာ လေယာဉ် ရောင်းချပေးနိုင်ယ့် တရုတ်၊ ယူဂိုစလားဗီးယား၊ ပိုလန်နိုင်ငံတွေနဲ့ အဆက်အသွယ် ရရှိခဲ့ပါတယ်။
ဒီစာအုပ်မှာ အသံထက်မြန်တဲ့ ကြားဖြတ်တိုက်လေယာဉ် အက်ဖ်-၇ တွေကို ဝယ်ယူတဲ့နေရာမှာ ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ဆောင် ရွက်ခဲ့တဲ့ ဆရာမြတ်ဟိန်းရဲ့တရုတ်နိုင်ငံမှာ သင်တန်းတက်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေ၊ လေယာဉ်တွေနဲ့အတူ မြန်မာနိုင်ငံကို ပျံသန်းလာတဲ့အတွေ့အကြုံတွေ၊ အသံထက်မြန်တဲ့ပျံသန်းမှု အတွေ့အကြုံတွေကို ဖတ်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဆရာမြတ်ဟိန်းက တပ်မတော်အစိုးရလက်ထက်မှာ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(လေ)၊ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်မှာ ပြည် ထောင်စုဝန်ကြီးတာဝန်တွေကို ဆောင်ရွက်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။
စိတ်ကူးချိုချိုက တန်ဖိုး ၂၀၀၀ ကျပ်နဲ့ ဖြန့်ချိထားပါတယ်။
ပင်လုံဦးဖေခင်နှင့် ၂၀ ရာစုပင်လုံညီလာခံ
စာရေးသူ – ဒေါက်တာညွန့်ရွှေ (တောင်ကြီး)
စာအုပ်အမည် – ပင်လုံဦးဖေခင်နှင့် ၂၀ ရာစုပင်လုံညီလာခံ
ပင်လုံဦးဖေခင်ဟာ တောင်တန်းပြည်မချစ်ကြည်စည်းလုံးရေးကို ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့အတူ အနီးကပ်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ သူတဦးဖြစ်ပါတယ်။ ရွှေတိဂုံညီလာခံမှာ တောင်တန်းဒေသနဲ့မြန်မာပြည်မ ပူးပေါင်းရေးအဆိုကို တင်သွင်းခဲ့တာကစပြီး ရှမ်း လူငယ်ခေါင်းဆောင်များနဲ့ဖဆပလအကြား၊ ဖဆပလနဲ့ရှမ်းစော်ဘွားများအကြား အဓိက ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းပေးသူတဦးဖြစ် ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဆရာကြီးဦးတင်ဧက `ဦးဖေခင်သည် ဖဆပလအဖွဲ့ချုပ်နှင့် ကျွန်တော်တို့ ရှမ်းပြည်လွတ်လပ်ရေး အဖွဲ့ ချုပ်တို့ကြားတွင် အောင်သွယ်ကြီးသဖွယ်ဖြစ်ခဲ့သည် `ဟု ဆိုခဲ့ဖူးပါတယ်။
ဒီစာအုပ်မှာ ဦးဖေခင်ရဲ့ကိုယ်တွေ့ပင်လုံမှာ မပါဝင်တဲ့ ဦးဖေခင်ရဲ့ငယ်ဘဝ၊ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘဝ၊ လွတ်လပ်ရေး ကြိုးပမ်းမှုအဆင့်ဆင့်မှာ ပါဝင်ခဲ့ပုံတွေကို ဖတ်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦး ဆောင်ကြိုးပမ်းနေတဲ့၂၁ ရာစုပင်လုံကိုလည်း ကြိုဆိုဂုဏ်ပြုတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
နေရီရီစာအုပ်တိုက်က တန်ဖိုး၂၇၀၀ ကျပ်နဲ့ ဖြန့်ချိထားပါတယ်။
စာရေးသူ – လှသောင်း (Dip in B.Dh)
စာအုပ်အမည် – အင်းစိန်တိုက်ပွဲ
အမျိုးအစား – စစ်သမိုင်းမှတ်တမ်း
လွတ်လပ်ရေးသက်တမ်းနုနယ်လှသေးတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာကို ခြိမ်းခြောက်ခဲ့တာကတော့ ရက်ပေါင်း ၁၁၁ ရက်ကြာမြင့်ခဲ့တဲ့ အင်းစိန်တိုက်ပွဲပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာဦးလှသောင်းဟာ အင်းစိန်တိုက်ပွဲစာအုပ် ရေးနိုင်ဖို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ရာ ဒေသတွေကို ကွင်းဆင်းလေ့လာခဲ့တယ်။ တိုက်ပွဲမှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့သူတွေကို တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုတွေ အကြိမ်ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ရ ပါတယ်။
ဒီစာအုပ်မှာ အင်းစိန်တိုက်ပွဲပေါ်ပေါက်လာရခြင်းအကြောင်းအရင်း၊ ပြည်ထောင်စုကြီးတည်မြဲရေးအတွက် တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြ ရပုံ၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေ တိုက်ပွဲမှာပါဝင်ခဲ့ကြပုံ၊ ကရင်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့အစိုးရတို့ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေး နွေးပုံ၊ စောဘဦးကြီးနဲ့အဖွဲ့ အင်းစိန်က တိတ်တဆိတ် ထွက်သွားပုံနဲ့အင်းစိန်အောင်ပွဲမှာ စစ်သည်တွေက ဗိုလ်မှူးကြီးကျော် ဇောကို အလေးပြုလိုက်ကြပုံအထိ ၁ ရက်ချင်းစီအလိုက် ရက်ပေါင်း ၁၁၁ ရက်ကို ရှားပါးဓာတ်ပုံမှတ်တမ်း၊ သတင်းစာမှတ် တမ်းများနဲ့အတူတင်ပြထားပါတယ်။
အင်းစိန်တိုက်ပွဲစာအုပ်ဟာ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်လည်း တစုံတရာ အကျိုးပြုနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းလည်း ဆရာဦးလှသောင်းက ဆိုပါတယ်။
DYNASTY BOOKS က တန်ဖိုး ၆၅၀၀ ကျပ်နဲ့ဖြန့်ချိထားပါတယ်။
စာအုပ်အမည် – စလေဦးပုညနှင့်ရှိတ်စပီးယားတို့၏ပြဇာတ်စာပေနှိုင်းယှဉ်လေ့လာချက်
အမျိုးအစား – ပြဇာတ်စာပေ
ရှိတ်စပီယားကွယ်လွန်ခြင်းနှစ် (၄၀၀)ပြည့်ကို မြန်မာနိုင်ငံ British Council မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ ဒီကွယ်လွန်ခြင်း အထိမ်း အမှတ်ပွဲမှာ ဆရာကြီးမောင်ဝင်းဝါက ရှိတ်စပီးယားရဲ့ဗင်းနစ်မြို့က ကုန်သည်နဲ့ ဦးပုညရဲ့ ရေသည်ပြဇာတ်တို့ကို နှိုင်းယှဉ် လေ့လာဟောပြောခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီတုန်းက ဟောပြောမှုတွေကို ပိုမိုပြည့်စုံအောင် ချဲ့ထွင်ထားတဲ့ ဒီစာအုပ်မှာတော့ စာပေ အနုပညာနှင့်ယဉ်ကျေးမှု၊ ရှိတ်စပီးယားနှင့်ဦးပုည၊ ကမ္ဘာက သိသော ဦးပုည၊ ကမ္ဘာကျော်သော ရှိတ်စပီးယား၊ စာရေးသူနှင့် ရှိတ်စပီးယားပြဇာတ်၊ ရှိတ်စပီးယားနှင့်ဦးပုည၏စာပေရနံ့၊ အဋ္ဌနိပါတ် ဂင်္ဂါမာလဇာတ် ရေသည်ဝတ္ထု၊ ရှိတ်စပီးယား၏ ဗင်းနစ်မြို့က ကုန်သည်၊ ရေသည်ပြဇာတ်အဖွင့် အတွေးစကားနှင့် ဆာလီလာကွီ (Soliloguy) စတဲ့ ကမ္ဘာနဲ့မြန်မာစာပေ ဆက်နွယ်မှုအကြောင်း အရာတွေကို မူရင်းပြဇာတ်ကဗျာ၊ အဖွင့်ရှင်းလင်းချက်ဘာသာပြန်များနဲ့အတူ ခံစားဖတ်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Net. Litt. Publications က တန်ဖိုး ၁၅၀၀ ကျပ်နဲ့ ဖြန့်ချိထားပါတယ်။